प्रधानमन्त्री ज्यु, चित्र ठुलो कि चरित्र? - Nepal Talk
फाल्गुन १९ गते, २०७७ मा प्रकाशित
‘यँहा देशको छ चिन्ता, तिमी मायाँ मायाँ भन्छयौ, साँच्चै नबुझने हौ कि नबुझे जस्तै बन्छेउ’। यि हरफहरु कृष्णहरि बरालले गाएका गितको सानो अंश थियो । गितसंगितले मनोरन्जन मात्र होइन समाजभित्रको यथार्थ कुराहरु पनि ओकेलेको हुन्छ । उनै बरालले गाएको यो मिठो शब्दको भावहरु नेपाली राजनितिका सत्ताचालकहरुसंग मिल्दोजुल्दो छ ।
यो साता प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बोलेको एक अभिव्यक्ति सुनिरहंदा उनै बरालले लेखेको गित सम्झायो । संसद बिघटनको प्रकरणलाई लिएर अदालतले ओलीबिरुद्ध फैसला सुनायो । कानुनको नजरमा गलत ठहर भइसके र पनि उनी तर्सेनन् । सामान्य जोक्स र टुक्काले आफनो गल्ती टालटुल पार्दै बोल्न सिपालु प्रधानमन्त्री आफनै अभिव्यक्तीले चिप्लिएका छन् । अदालत र संबिधानलाई सम्मान गर्न जानेका थिए भने नैतिकताका आधारमा उहिल्यै उनले राजिनामा दिसक्नुपथ्र्याे सकेनन् बरु उल्टै आफुलाई धुलोमैलो लाग्ने हो कि, कतै ठेस लाग्ला कि भन्ने तर्कना बाडिरहेका छन् । एकजना दार्शनिकले भनेका थिए ‘अ म्यान विद आउट एथिक्स इज वाइल्ड वेस्ट लुज अपन दिज वल्ड, अर्थात नैतिकता बिनाको एकजना मानिस जंगली जनावर भन्दा पनि खुल्ला हुन सक्छ ।
संसद बिघटन भएको दिन, पुस पाँच गतेका दिनदेखि उनले आफुलाई जसरि हुन्छ सफाई दिएर चोख्याउनतिर लागिपरेका छन् । एवमरितले आफैले आफैलाई एकाएक भाइरल बनाइरहेका छन् । पोखराको एक सभामा कार्यकर्तासंग आफु शुरक्षित छैन भन्ने अभिव्यक्ति दिए । उनले भने म नरहे पनि पार्टि छ अन्यथा नलिनु भनेर कार्यकर्तासंग सान्त्वना बाडे । उनको यो बोली जनतालाई पत्यार लाग्दो थिएन । ठुला राष्ट्रिय दैनिकहरुले समेत प्रधानमन्त्रीको खुलेरै आलोचना गरेका थिए ।
यतिसम्म कि यो अभिव्यक्तीले गृहमन्त्रालयलाई र समग्र शुरक्षा निकायको कामलाई समेत प्रश्नचिन्ह उठायो । प्रधानमन्त्री अशुरक्षित भएको मुलुकमा जनता के होलान ? प्रधानमन्त्री के कारण अशुरक्षित न कुनै कारण खुलाएका छन् । यहि सवाल कतिलाई मिठो लाग्यो होला तर प्रधानमन्त्री जस्तो जिम्मेवार पदमा बसेर हावादारि कुरा गर्न मिल्छ? भनेर उनलाई धेरैले नैतिक प्रश्न उठाएका छन भने कतिपयले त उनलाई इमोस्नल ब्ल्याकमेल गर्याे समेत भनेका छन । जे होस यस्ता उडन्ते गफले प्रधानमन्त्रीको स्त्तर घटाएको भने पक्कै पनि हो । प्रधानमन्त्रीको वरिपरि बिभिन्न अडकलबाजी र टिकाटिप्पणी भइरहेका छन् । एक राष्ट्रिय सन्चारमाद्यमले प्रधानमन्त्री अशुरक्षित छु भन्ने शिर्षकमा प्रकाशित भएको समाचारका कमेन्टहरु हेर्दा लाग्छ प्रधानमन्त्री साँच्चै गलत छन् । उक्त कमेन्टमा सत्तरि प्रतिशत भन्दा बढि प्रधानमन्त्रीलाई गालि गरिएको छ । हेर्नुहोस जस्ताको तस्तै
मार्थिन निकोलले भनेका छन । सहि र गलतको सापेक्षता खोन्नु भनेको व्यवसायिक चरित्र प्रदर्शन गर्नू हो । बिकाश निर्माणका सवाल ओझेलमा छन् । अर्थतन्त्रले थला पारेको मुलुकमा युवाहरु बेरोजगारको पिडामा छन् । चिया दुकानदेखि सामाजिक सन्जालसम्म देश कता जाला भन्ने चियो र चर्चा छ । यता प्रधानमन्त्री भने आफनो सत्ता टिकाउने दाउपेचमा जुटेका छन् जे पनि बोल्छन् । सकरात्मक आलोचना मनन गर्दैनन् ।
राजनितिको सेरोफेरोमा भएको किचलाको मुख्य कारण नै केपी ओली देखिएका छन् । एक अर्काप्रतिको प्रतिशोध र अंहकारले गर्दा देश चलाउने जिम्मा पाएका सम्मानित व्यक्तित्वहरुमाथि अब राष्ट्रियताको प्रश्न खडा भएकोे छ । पाँच रुपैँयाको भेटि चढाउदा भगवानसंग पाँच लाख फलिफाप होस भन्ने हामी नेपालीहरु ऋाफुले तिरेको कर राज्यले दुरुपयोग गर्दा किन चुप लाग्लान र? अथवा कति दिन चुप लाग्लान कुनै हिसबाकिताब बिना अनुमाण मात्रै गरौ ।
देश प्रति जिम्मेवार भएर काम गर्छु भन्ने सपथ खाएर जनताको उधारो मत बटुलेको प्रधानमन्त्री भन्ने पद सस्तो लोकप्रियताको लागि हुनुहुदैन । । राष्ट्रको सार्वभौमसत्ता विपरित अभिव्यक्तिहरु दिनु न त नैतिकसम्मत हुन्छ न त कानुन सम्मत नै ठहर हुन्छ । जब सत्ता प्रजातन्त्रको खिलापमा जान्छ तब सरकारले आफनो परिचय सर्बसत्ताबादमा बदल्न थाल्छ । राजनितिक शाश्त्रको सिदान्तले पनि यहि कुराको सिद्ध गरेको छ । प्रधानमन्त्रीले विवादास्पद अभिव्यक्ति कुनै अन्जानमा दिने गरेका होइनन् । ओललिाई यदि गल्ती गरेछु भन्ने लागेको भए माफि माग्थे होलान यसो गर्नुको साटोमा उल्टोे संसद बिघटन गर्दा पनि समकक्षि नेताहरुलाई च्यालेन्ज गरेका थिए ।‘प्रधानमन्त्री ओलीलाई आज होइन भोलीलाइर्, जस्ता नाराहरुले उनको सत्तामोह छर्लङग बनाएको छ । अदालतको फैसला पछाडि पनि उनले कुनै आत्मसमिक्षा नदेखाएको देख्दा उनको नियतमाथि नै आमनागरिकले प्रश्न उठाएका छन?